ဖမ်းဆီးထားသော မူးယစ်တရားခံ သေဆုံးရမှုအတွက် အာမခံပေးထားသည့် ထိုင်းရဲမှူးကြီးဟောင်း တရားရုံ? - Yangon Media Group
ဖမ်းဆီးထားသော မူးယစ်တရားခံ သေဆုံးရမှုအတွက် အာမခံပေးထားသည့် ထိုင်းရဲမှူးကြီးဟောင်း တရားရုံ?
ဘန်ကောက်၊ စက်တင်ဘာ ၇
ထိုင်းနိုင်ငံ မောင်းခရိုင်ရဲ မှူးကြီးဟောင်း မွန်ထရီနှင့် ရဲအရာရှိ ငါးဦးတို့ကို ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် မူးယစ်ဆေးဝါး တရားခံတစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ရာတွင် တရားရုံးသို့လာရောက်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သော ရဲမှူးကြီး ဟောင်း မွန်ထရီအား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဆင့်လိုက်သည်ဟု စက်တင် ဘာ ၇ ရက်သတင်းများအရ သိရသည်။ အမှုစစ်ဆေးနေဆဲ ၎င်းကို အာမခံဖြင့် ထုချေခွင့်ပေးထားစဉ် ရုံးချိန်းမလာရောက်ဘဲ ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်း၏ရှေ့နေဖြစ်သူက အသက် (၆၈) နှစ်ရှိ ရဲမှူးကြီးမွန်ထရီဆရီဘွန်လူးနှင့် မိမိမတွေ့ဆုံဖြစ် သေးကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ရဲမှူးကြီးဟောင်း မွန်ထရီ အား အာမခံကာလအတွင်းနိုင်ငံတွင်းမှ မထွက်ခွာရန် တရားရုံးက တားမြစ်ထားသည်။
၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်က မူးယစ်ဆေးဝါးတရားခံ ဖြစ်သူ အသက် (၁၇) နှစ်အရွယ် တရားခံအား ကာလာဆင်းဘူတာရုံတွင် အသတ်ခံခဲ့ရခြင်းအတွက် ၎င်းအား တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ ရဲတပ်ခွဲတပ် ထောက်များဖြစ်ကြသော အန်ခန်းခန်မွန်နာ (၅၄) နှစ်၊ ဆူသီနမ်နန်းဆင်း (၄၉) နှစ်၊ ပန်ဆင်အူပါနန် (၄၈)နှစ်၊ ဒုတိယရဲမှူးကြီးများဖြစ် ကြသော ဆန်ဖာရိုအင်ဒီ (၅၇) နှစ်နှင့် ဆူမစ်နန်ဆာသစ် (၅၁) နှစ်တို့အားလည်း တာဝန်မကင်း ကြောင်း စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးထား ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှုတွင် စွပ်စွဲခံရသူများက မိမိတို့တွင် အပြစ်မရှိကြောင်း တရားရုံး၌ ထုချေလျှောက်လဲခဲ့ကြသည်။
Ref:The Bangkok Post
ထရန့်က မြောက်ကိုရီးယားနှင့် နျူကလီးယား ဆွေးနွေးမှု ယခုအထိ အသက်ဝင်ဆဲဟု ပြော
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၌ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် “Mandalay Travel Show-2017” ပြုလုပ်သွားမည်
ရာသီကုန်တွင် ဘိုင်ယန်မြူးနစ် အသင်းမှ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း နည်းပြ ဂျက်ဟေးနက် အရိပ်အမြွက် ??
ဆံပင်ပုံစံသစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည့် အကြောင်းရင်းကို အဂူရို ဖွင့်ဟ
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ ဘားတစ်ခုတွင် သေနတ်သမားတစ်ဦး၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူတစ်??